Rakhiye 808nm Diode Laser Timo Bixiyeyaasha Mashiinka iyo Warshadda | KOOXDA VTEX
808nm Diode Laser Mashiinka Saarista Timaha
1,100% Jarmalka ayaa soo dhoofiyay Laser Stacks
2, safayr Dhabta ah ee Crystal, tabinta qaboojinta ugu fiican
3. 12 * 20mm cabbirka weyn, oo leh habka daaweynta "IN-Motion", xawaaraha daaweynta ugu dhakhsaha badan
4. 808nm dherer saddex-geesood ah. achevinq natiijada ugufiican dhamaan noocyada timaha iyo dhamaan noocyada maqaarka
DTiknoolajiyada ka saarista timaha laser-ka ee iode waxay ku saleysan tahay isbedelka xulashada ee iftiinka iyo kuleylka Laydhka ayaa maraya dusha maqaarka si loo gaadho xididka xididdada timaha Iftiinka waa la nuugi karaa loona beddelaa kuleylka unugyada timo jeexjeexa, si markaa dib u soo cusbooneysiinta timo luminta iyada oo aan dhaawac soo gaarin unugyada ku wareegsan. Tiknoolajiyadda ugu amniga badan, wax ku oolka ah ee timo-ka-saarista joogtada ah hadda.
Faa'iidada Mashiinka Timo Goynta Laser Diode Laser
10 * 20mm cabbirka weyn ee booska iyo 10 HZ celceliska, iyo "IN-Motion" habka caqliga leh ee keenaya xawaaraha ugu dhakhsaha badan ee daaweynta 10shots ilbidhiqsi, taas oo badbaadin doonta waqti badan oo daaweynta lagu sameeyo.
2. Wax ku ool ah
a. 2000W koronto xoog leh, waxay sameysaa soo saar koronto joogto ah
b. Jarmalku wuxuu soo dhoofiyay Laser Stacks, 10 lakab iyo wax soo saar 800W. (Tallaal kasta, tamar joogto ah)
3. Amaan iyo xanuun la'aan
Waxaan u adeegsaneynaa nidaamka qaboojinta TEC ee taangiyada biyaha iyo TEC oo loogu talagalay safayr gacanta, sidaa darteed waxaad heli kartaa 24 saac oo aad ku shaqeysid mashiin, nidaamka qaboojinta TEC ee gacan-yaraha Safayr 0-5 ° C, taas oo ka dhigeysa daaweynta marwalba mid raaxo leh.
4. Easy si ay u shaqeeyaan interface
Naqshadeynta qaabka caqliga leh ee otomaatigga ah ee loogu talagalay dadka isticmaala, Waxaan u sameynay horudhacyo kala duwan oo loogu talagalay qaybaha kala duwan ee jirka, jinsiga iyo noocyada maqaarka, xitaa dadka isticmaala cusub, waxay si fudud ugu shaqeyn karaan mashiinka.
10.4 ”24 midab taabashada shaashadda LCD
10-1400ms la hagaajin karo
1-120J / cm2 la hagaajin karo
Qaboojinta korontada kuleylka ah + qaboojinta biyaha + Qaboojinta Hawada + qaboojinta safayr ee madaxa laser
AC 220V / 50Hz ama AC 110V / 60Hz
Hore: 808nm Diode Laser Timaha Mashiinka Mashiinka - Haidari
Xiga: Mashiinka Mashiinka Tattoo Laser Picosecond
808 Diode Laser Timo Bixinta
808 Diode Laser Mashiinka Timo Bixinta
Diode Timo Goynta Laser
Diode Laser 808 Timo Goynta
Ipl Opt Mashiinka Mashiinka Timo Bixinta joogtada ah Ha ...